जनगणनाका लागि छ गुणा बढी दरखास्त - Sankalpa Khabar
1. कांग्रेसले भन्यो- स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न सरकार असफल
2. कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको परिवारै कोरोना संक्रमित
3. माधव पक्ष सांसदले सामूहिक राजीनामा दिए देउवा प्रधानमन्त्री
4. उपनिर्वाचनको लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै, एमालले अझै टुङ्ग्याएन उम्मेदरवार
5. मध्यरातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन
6. ९०७० संक्रमित थपिए, संक्रमणबाट ५४ जनाको निधन
जनगणनाका लागि छ गुणा बढी दरखास्त
१८ चैत्र ०८:३३
भरतपुर । आगामी १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाका लागि चितवनमा दरबन्दीभन्दा करिब छ गुणा बढी दरखास्त परेको छ । चितवनमा गणक र सुपरीवेक्षकका लागि छ हजार ७९३ जनाको दरखास्त परेको हो । चितवनका जिल्ला जनगणना अधिकारी यज्ञमूर्ति भण्डारीले चितवनमा २०३ सुपरीवेक्षक तथा ८९५ गणकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको जानकारी दिए । चितवनका लागि आवश्यक दरबन्दीभन्दा अनलाइनमार्फत फारम भर्नेको सङ्ख्या करिब छ गुणा बढी हो । त्यस्तै दरखास्त दिनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या दोब्बर छ ।
भण्डारीले चितवनमा जनगणनाका लागि तीन हजार ६१८ महिला, एक हजार ८६४ पुरुष तथा दुई जना अन्य लिङ्गीले अनलाइन फारम भरेको जानकारी दिए । जनगणना तयारीको काम तीव्ररूपमा अगाडि बढेको भन्दै जिल्लाका सात स्थानमा आगामी वैशाख १ गते स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने उनले बताए । भण्डारीका अनुसार भरतपुरको भरतपुर–१०, भरतपुर–६ गीतानगर र भरतपुर–१८ चनौलीमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिँदैछ ।
त्यस्तै कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका हेर्ने गरी कालिकामा, रत्ननगर नगरपालिका लागि रत्ननगर नगरपालिकामा तथा राप्ती र खैरहनी हेर्ने गरी राप्ती नगरपालिकामा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुने भण्डारीले बताए । भण्डारीका अनुसार भरतपुरमा मात्रै ४६२ गणक र १०४ सुपरीवेक्षकको दरबन्दी रहेको छ । त्यस्तै माडीमा ५३ गणक र १४ सुपरीवेक्षक, रत्ननगरमा १२२ गणक र २४ सुपरीवेक्षक, कालिकामा १०५ गणक र २२ सुपरीवेक्षक तथा राप्तीमा १५३ गणक र ३९ सुपरीवेक्षक आवश्यक पर्छ ।
सुपरीवेक्षकका लागि चैत २० गते सम्पर्क मिति तोकिएको भण्डारीले बताए । उनले सुपरीवेक्षकलाई वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म तालिम दिइने तथा वैशाख १६ देखि जेठ १४ गतेसम्म घरपरिवार सूचीकरणको काम हुने जानकारी दिए। जेठको १० देखि १४ गतेसम्म गणक नियुक्ति तथा १७ देखि २२ सम्म तालिम हुने उनले बताए ।
मुख्य गणना भने २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुने भन्दै असार ८ गते नै १२औँ राष्ट्रिय जनगणना दिवस मनाइने भण्डारीले बताए । असोज मसान्तसम्म प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिने भण्डारीको भनाइ छ । त्यस्तै २०७९ वैशाखबाट अन्तिम नजिता प्रकाशन हुने कार्यसूची रहेको उनले बताए । यसपटक १४ वटा विषयमा विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन हुनेछ ।
आजदेखि थप ६ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु हुने
१९ बैशाख ०७:२३
ओलीको पक्ष र विपक्षमा बहुमत जुटाउन जसपामा दुवै पक्ष…
२१ बैशाख ०७:२२
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर…
१८ बैशाख ०७:३५
कैलालीमा वैशाख ३० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बाइयाे
१९ बैशाख ०९:२८
२३ जिल्लामा निषेधाज्ञाः चार जिल्लामा आजदेखि
१८ बैशाख ०७:०२
कोभिड प्रतिकार्यमा खटिन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
२४ बैशाख ०७:४३
यार्सागुम्बा नखुल्दै पाटन पुगेका एकको लेक लागेर मृत्यु
२३ बैशाख ०७:५२
२३ बैशाख ०७:०१
चट्याङ लागी मृत्यु भएका वडा सदस्यको शव बोकेको जिप…
२२ बैशाख ०७:१२
मलामी बोकेको जीप दुर्घटना,१७ घाइते
२४ बैशाख १३:०१
कोरोनाबाट चितवनमा पाँचको मृत्यु
२४ बैशाख १२:१८
उम्मेदवारी दर्ता गर्न बादल बालुवाटारबाट सीधै हेटौंडा प्रस्थान
२४ बैशाख १२:०८
माधव नेपालले भने– ओलीसँग कुनै सहमति भएको छैन
२४ बैशाख ११:५२
ओली–माधव ‘मिलाप’ले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई के असर गर्ला…
२४ बैशाख १०:५५
माधव नेपाल पक्षमाथिको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिन ओली तयार
२४ बैशाख १०:१९
चुनावमा जान डराए गृहमन्त्री थापा, अर्कै उम्मेदवार खोज्न एमाले…
२४ बैशाख ०९:४०
आज पनि मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
२४ बैशाख ०८:३६